नेपालमा रेमडेसिभिरको प्रयोग कति प्रभावकारी ?, यसो भन्छन् चिकित्सक | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपालमा रेमडेसिभिरको प्रयोग कति प्रभावकारी ?, यसो भन्छन् चिकित्सक
नेपालमा रेमडेसिभिरको प्रयोग कति प्रभावकारी ?, यसो भन्छन् चिकित्सक
भदौ १७ गते, २०७७ - ०७:३४
सरकारी अस्पतालमा रेमडेसिभिर निःशुल्क पाइने
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन र औषधि तयार नहुँदासम्म आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगमा ल्याइएको रेमडेसिभिर (एन्टिबाइल) नामक औषधि गत सातादेखि नेपालमा पनि संक्रमितमा प्रयोग हुन थालेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा क्लिनिकल परीक्षणका रूपमा प्रयोग भइरहेको रेमडेसिभिरलाई नेपालमा पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’का लागि ११ अगस्टमा प्रयोगमा ल्याउन स्विकृति दिइएको छ ।
विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले रेमडेसिभिर नेपाल आयात गर्न तीनवटा भारतीय औषधि कम्पनी (सिप्ला, हेटेरो र माइलन) ले अधिकार पाएको जानकारी दिए । जसमध्ये हाल माइलन कम्पनीमार्फत आयात गरिएको औषधि नेपालमा प्रयोगमा आउन थालेको छ । अन्य दुई कम्पनीले औषधि पठाउने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोगबाट सामान्यभन्दा निकै समयअगाडि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको भन्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग भइरहेको छ ।
विभिन्न अध्ययनहरूले छोटो समयमै संक्रमण निको पार्न सहयोगी भएकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिने देखाएपछि नेपालमा पनि ट्रायलकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउन औषधि व्यवस्था विभागले मान्यता दिएको हो ।
वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुन कोभिडका बिरामीको उपचार गरिरहेका काठमाडौंका ठूला अस्पतालले प्रयोगमा ल्याइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भर्खरै मात्र प्रयोगमा ल्याइएकाले नेपालमा रेमडेसिभिर औषधि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिन्न । तर, कोभिडविरुद्ध प्रयोग भइरहेका अन्य औषधि र उपचार पद्धतिभन्दा बढी प्रभावकारी मानिएकाले केही हदसम्म सहयोगी हुन्छ भन्ने आश छ ।’
रेमडेसिभिर कोरोना संक्रमितको उपचारमा राम्रो विकल्प बन्न सक्छ
पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले रेमडेसिभिर (एन्टिबाइल) औषधि अहिलेको समयका लागि राम्रो विकल्प बन्न सक्ने बताउँछन्, डा.असरफ हुसेन ।
भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले कोरोनाविरुद्धका लागि प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर मात्र प्रयोगमा आइरहेको छ । केही व्यक्तिमा प्लाज्मा थेरापी गरिए पनि सबैमा गर्न सम्भव छैन । जटिल खालका लक्षण देखिएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन रेमडेसिभिरमाथि आस जागेको छ ।’
रेमडेसिभिर कोरोनाको मुख्य औषधि भने होइन । यसले सबै व्यक्तिमा एक किसिमको प्रभाव पार्छ भन्ने कुनै आधार नभएको बताउँछन्, डा. हुसेन । भन्छन्, ‘यो अन्य औषधिभन्दा केही बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मात्रै हो, तर रेमडेसिभिर सबै बिरामीमा प्रयोग गर्न भने मिल्दैन । अहिले पनि ट्रायलकै रूपमा प्रयोग भइरहेकाले शतप्रतिशत नतिजा दिन्छ भन्ने पनि छैन ।’
नेपालका अस्पतालले प्रयोेगमा ल्याइसकेपछि मात्र यो औषधिको प्रभावकारिताबारे अनुमान गर्न सकिने उनी बताउँछन् । हुुसेनका अनुसार यसको प्रभावकारिता थाहा पाउन अझै एक महिनाजति समय लाग्न सक्छ ।
प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिरजस्ता औषधि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको वैकल्पिक उपाय मात्र भएकाले शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘अहिलेका लागि मास्क लगाउने, कम्तीमा २० सेकेन्ड हात धुने र भौतिक दूरी कायम राख्नु नै कोरोनाबाट बच्ने शतप्रतिशत माध्यम हो,’ डा.हुसेन भन्छन् ।
रेमडेसिभिर औषधि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले सरकारी अस्पतालले रेमडेसिभिर किनेर बिरामीलाई निःशुल्क दिनुपर्ने र त्यसको भुक्तानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारी दिए ।
तीन वटा भारतीय कम्पनीमार्फत नेपाल आयात गरिएको रेमडेसिभिर औषधि अब नेपालका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइनेछ । औषधिको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गरेको हो । निजी अस्पतालमा भने रेमडेसिभिरको मूल्य सात हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार रेमडेसिभिरको मूल्य कम्पनीअनुसार फरक हुन्छ । यो औषधि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार लगातार पाँच दिनसम्म इन्जेक्सनमार्फत ६ देखि ११ वटा भाइल दिन सकिन्छ ।
विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार, प्रत्येक भाइलको मूल्य भारतमा बिक्री वितरण भइरहेकै मूल्यमा उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । हाल प्रयोगमा आइरहेको माइलन नामक कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको औषधि प्रतिभाइल सात हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ । यसरी एक विरामीको कम्तीमा ४२ हजारदेखि ७७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।
के हो रेमडेसिभिर ?
रेमडेसिभिर अमेरिकी कम्पनी ‘गिलिड साइन्सेस’ ले उत्पादन गर्छ । हेपाटाइटिस सीका बिरामीका लागि सन् २००९ मा यसको उत्पादन थालिए पनि पछिल्लो समय इबोला, सार्स र मर्स भाइरसका संक्रमितमा पनि यो औषधि प्रयोगमा ल्याइएको थियो । विश्वमै रेमडेसिभिरलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी औषधि मानिएको र तत्काल कोरोना संक्रमितमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्रभावकारी एन्टिबाइल मानिएको छ ।
अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायत मुलुकमा यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ । नेपालमा पनि दुई साताअगाडि औषधि व्यवस्था विभागले क्लिनिकल ट्रायलका लागि मान्यता दिएको छ । हाल नेपालमा पनि केही अस्पतालले संक्रमितमा रेमडेसिभिर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा पनि सिकिस्त बिरामीमा रेमडेसिभिर औषधि दिँदा सामान्यभन्दा निकै समयअगाडि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको पाइएकाले प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिइएको बताइएको छ ।
गत असारमै अमेरिकामा क्लिनिकल परीक्षणपछि इन्जेक्सनमार्फत कोभिडका बिरामीलाई यो औषधि दिँदा चाँडै निको भएको भन्दै प्रयोगमा ल्याउन सुरु गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरसको खोप र औषधि तयार नहुँदासम्म रेमडेसिभिरलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता दिइएको छ । यो औषधि नेपाल ल्याउन औषधि व्यवस्था विभागले तीनवटा भारतीय औषधि कम्पनीलाई मान्यता दिएको छ ।
हालसम्म माइनल नामक कम्पनीमार्फत यो औषधि नेपाल आयात भइरहेको छ । कोभिडको उपचार गरिरहेका ठूला अस्पतालमा गत बिहीबारदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।
भदौ १७ गते, २०७७ - ०७:३४ मा प्रकाशित